I-Nandrolone Steroid Powder
I-Boldenone Steroid Powder
I-Masteron Steroid Powder
I-Methenolone Steroid Powder
I-Antiestrogen Steroid Powder
Impushana Yokuthuthukisa Ucansi
I-Oral Steroid Powder
I-GHRP-2 isiza kanjani ekukhuthazeni ukukhiqizwa kwe-GH yemvelo emzimbeni?
I-GHRP-2 (I-Growth Hormone Releasing Peptide 2) i-hormone yokukhula secretagogue yesigaba se-hexapeptide.Ukwabelana ngokufana okuningi ne-GHRP-6, i-GHRP-2 ingeyokuqala kuleli klasi lamahomoni, futhi emibuthanweni eminingi, kubhekwa njengendlela engcono kakhulu phakathi kwayo ne-GHRP-6.Ikona ...
I-AndarineS4 ​​yaziwa kakhulu ngokusiza ekwandeni kwamandla futhi ivumela umuntu ukuthi aphakamise izinsimbi ezinzima.
I-Andarine, eyaziwa kakhulu ngokuthi i-S4, iyi-Selective Androgen Receptor Modulator (SARM) eyakhiwe yi-GTx.Njengazo zonke i-S4 ye-SARM yathuthukiswa ekwelapheni izifo zokumosha imisipha ngokwelashwa kwe-benign prostatic hypertrophy futhi iphezulu ohlwini lokwelashwa okungenzeka ...
Le steroid Winstrol (stanozolol) inamandla okwandisa kakhulu amandla futhi lokhu kungahumushela kokubili amandla nesivinini.
I-Winstrol ingenye ye-anabolic steroids ethandwa kakhulu futhi eyaziwa kakhulu emhlabeni.Ithuthukiswe yi-Winthrop Laboratories ngasekupheleni kwawo-1950, lena i-anabolic steroid ethole ukunakwa okuningi kwemidiya phakathi neminyaka.Eqinisweni, labo abangakaze basebenzise ama-anabolic steroids ...
I-Primobolan (i-Methenolone Acetate) yayingenayo imiphumela emibi ecacile ekuqeqesheni ukuqina?
I-Primobolan i-oral anabolic steroid ehlukile kancane uma iqhathaniswa nama-oral anabolic steroids amaningi.Ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili, kubalulekile ukuthi sihlukanise umehluko phakathi kwe-Primobolan ne-Primobolan Depot.I-Primobolan Depot inguqulo yomjovo ye-hormone...
I-Masteron (i-Drostanolone propionate) kufanele isetshenziswe ngokulinganisela kulabo abanomfutho ophakeme wokuqeqesha.
I-Drostanolone Propionate iyi-steroid ye-anabolic androgenic eyaqala ukushaya emakethe cishe ngo-1970 ngaphansi kwegama lokuhweba elithi Masteron elakhiwe yi-Syntex.Kodwa-ke, i-compound yasungulwa yi-Syntex ngo-1959 kanye ne-Oxymetholone (Anadrol) kodwa ngeke ikhululwe ...
Imiphumela ye-Human Growth Hormone (Somatropin) ekuqineni iyahlukahluka kumuntu nomuntu.
I-Human Growth Hormone (HGH) akuyona nje enye ye-hormone ezuzisa kakhulu umzimba wethu ekhiqizayo, kodwa enye efunwa kakhulu ngefomu exogenous.Ngesimo sangaphandle, i-HGH iyafana nehomoni ekhiqizwa ngokwemvelo, futhi ayimeleli nje eyodwa ezuzisa kakhulu ...
Nge-Equipoise (Boldenone Undecylenate) ungakwazi ukukhulisa imisipha yakho ngokushesha.
I-Boldenone Undecylenate iyi-testosterone etholakala ku-anabolic androgenic steroid eyaziwa kakhulu ngegama lokuhweba elithi Equipoise elanikezwa lona ngu-Squibb ngawo-1970.Nakuba i-Equipoise ihlukaniswa ngokusemthethweni njengodokotela wezilwane ebangeni le-anabolic steroid, amaqoqo okuqala e-Bolden...
Ingabe i-Dianabol (i-Methandrostenolone) ingafinyelela ukuzuza kwemisipha okungalindelekile nomphumela wokulahlekelwa kwamafutha?
I-Dianabol imelela enye yezinto ezithandwa kakhulu futhi enye ye-anabolic steroids ebaluleke kakhulu yesikhathi sonke.Ngaphandle kokungabaza, lena i-steroid yomlomo ethandwa kakhulu eyake yafika emakethe futhi enye ye-steroids ethandwa kakhulu kunoma yiluphi uhlobo.Ngenkathi cishe njalo itholakala njenge-oral ...
Cabanga nge-Deca Durabolin (i-Nandrolone Decanoate) yokuqeqeshwa komjikelezo kanye nokusetshenziswa kwangaphambi komjaho nangemuva komjaho.
I-Deca Durabolin iyi-steroid edume kakhulu ye-anabolic ehlanganisa i-hormone ye-steroidal Nandrolone futhi inamathele ku-ester enkulu ye-Decanoate.I-hormone ye-Nandrolone yaqala ukuvela ku-1960 futhi yenzelwe ukusetshenziswa kwezohwebo ku-1962 yi-Organon ngaphansi kwegama lokuhweba elithi Deca ...
I-Clomid (i-Clomiphene Citrate) iyinkosi yemikhiqizo ephikisana nabesifazane.
I-Clomid (i-Clomiphene Citrate) iyi-anti-estrogen esebenza ngamandla ehlelwa ngokusemthethweni njenge-Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM).Ngezindlela eziningi, ifana kakhulu nenye i-SERM ethandwayo e-Nolvadex (Tamoxifen Citrate).UClomid waqala ukunakwa emhlabeni jikelele ...
Ingakanani i-Clenbuterol oyidingayo ukuyilawula ukuze iphumelele kakhudlwana?
I-Clenbutero Hydrochloride iyi-bronchodilator enamandla esetshenziselwa ukwelapha ukuphazamiseka kokuphefumula njengesifuba somoya.Nakuba kube yimpumelelo enkulu ezinhlelweni ezinjalo zokwelashwa akukaze kugunyazwe i-US FDA.Nokho, ivunyiwe futhi isetshenziswa kwamanye amazwe amaningi...
Anavar (Oxandrolone) has the fewest side effects for women's fitness.
I-Anavar igama lomkhiqizo elidumile elihlotshaniswa ne-dihydrotestosterone etholakala ku-anabolic steroid Oxandrolone.I-hormone ye-Oxandrolone yaqala ukukhishwa ekuqaleni kwawo-1960 ngaphansi kwegama lokuhweba elithi Anavar ngu-GD Searle & co.futhi kuthiwa uphethe imithi eminingi yokwelapha...
12Okulandelayo >>> Ikhasi 1/2
Ikheli:F6, Yueyang Xili, Siming District, Xiamen, Fujian, China